Guddiyo Farsamo ka kala socda Soomaaliya iyo Somaliland oo shir uga furmay Jabuuti - Tilmaan Media
Waxaa Hotelka Kempisky ee magaalada Jabuuti ka furmay Shir ay leeyihiin Guddiyo ka kala socda Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo Maamulka Somaliland.
Guddigan Farsamo ee labada dhinac ayaa ka mid ahaa waxyaabihii lagu heshiiyay ee Shirkii shalay, iyadoo furitaankii shirkii maanta ee Guddigaas ay goobjoog ka ahaayeen Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo, Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi, Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Amb. Yamamoto, Midowga Yurub, IGAD.
Shirkan Guddiga Farsamada ayaa waxaa fududeynaya oo kor-joogte ka noqonaya Wasiirka Arrimaha Dibadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf.
Madaxweyne Farmaajo oo hadal kooban ka jeediyay shirka Guddiga farsamada labada dhinac ayaa sheegay inuu rajeynayo in shirkan uu guul ugu dhamaado, isla markaana si dhab ah loo wada hadlo.
Ajandaha Shirka Guddiga Farsamada ayaa laga saaray qodobkii Midnimada Soomaaliya ee shalay la doonayay in furitaanka shirka looga hadlo, kaddib markii uu diiday Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi, waxaana shirku noqday mid lagu kala tagay, oo aakhirkii war murtiyeed lagu badbaadinayo wada hadalada la soo saaray, kaasoo ka soo baxay Guddi Farsamo oo wada hadalada sii wada.